Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy - Ny Teny Fototra • Mianara momba anareo
Io boky mahatalanjona izay nosoratana tsotra io dia manokatra vistas ho any amin'ireo saha izay nafenina tao amin'ny mistery nandritra ny taonjato maro. Eto ianao dia hianatra fa ny dingana voalohany mankany amin'ny fahaterahana indray ara-panahy dia mahatakatra ny fiankinan'ny taranak'olombelona ao amin'ny vatana teraka amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana. Eto koa ianao no hianatra ny maha-izy anao tena marina-ilay toetra miaina ao amin'ny vatana-ary ny fomba ahafahanao mandika ny andian-teny ipotisma izay efa nahatonga anao hisaina sy hieritreritra anao hatramin'ny fahazazany. Ho takatrao amin'ny alalan'ny fisainan'ny fisainanao manokana ny antony mahatonga ny olona ao anaty haizina mikasika ny niandohany sy ny ho avy farany. Amin'izao fotoana iainan'ny fiainan'ny sela vaovao izao dia manomboka manova fomba fisainana sy fahatsapana ary faniriana ny Fahendrena ny Fahendrena. Mifototra amin'ny fahatsapany izany, manondro tsikelikely ny tenany amin'ny vatany izy ary very ny fanondroana azy amin'ny maha-izy azy marina sy mandrakizay. Ilay mpikomy tsy maty tsy an-kiato, izay resy lahatra tamin'ny fahafatesany, matetika tsy mahita ny fahafahany hahita ny toerana mety ao amin'ny Cosmos ary tsy mahavita ny tanjona fara-tampony. Lehilahy sy Vehivavy ary Ankizy mampiseho ny fomba fampiasana izany fahafahana ho an'ny fahita-tena izany!
Vakio ny Lehilahy sy ny Vehivavy ary ny Zanaka
"Tsy mifototra amin'ny fanantenana feno fanantenana ireo fanambarana ireo. Manamafy ny porofo momba ny anatomika, ara-tsaina, ara-biôlôjika ary ara-tsaina izy ato, izay azonao atao, raha tianao, handinika, handinika sy hitsara; ary ataovy izay heverinao fa tsara indrindra. " HW Percival